Washington oo dalbatay in la baabi’iyo hindise sharciyeedkii muddo kordhinta ee 12 April. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Washington oo dalbatay in la baabi’iyo hindise sharciyeedkii muddo kordhinta ee 12...
Washington oo dalbatay in la baabi’iyo hindise sharciyeedkii muddo kordhinta ee 12 April.
War saxaafaded ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa loogaga codsaday Farmaajo iyo baarlamaanka inay si deg deg ah uga howl-galaan baabi’inta hindise sharciyeedkii muddo kordhinta ee 12 April.
Bayaankan ayaa lagu yiri “Waxaan ka codsaneynaa madaxda qaranka iyo kuwa Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya inay si deg deg ah u kulmaan, si loo dhameystiro qaabka doorashada ee la isku raacsan yahay, lana qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii Sebtember 17.”
Mareykanka ayaa ugu baaqay ciidamada Soomaaliya iyo kooxaha kale ee hubeysan in ay dib u gurtaan oo ay oggolaadaan in wadahadallada siyaasadeed ay dib ugu bilowdaan jawi ka caagan rabshado iyo cagajugleyn.
“Rabshadaha oo sii socda ayaa waxay noqon doonaan kuwa uun kaliya u adeega inay xaaladda uga sii darto shacabka Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedkan.
Previous articleGuddoonka Golaha Shacabka oo beeniyay in xil ka qaadis lagu sameynayo Rooble
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo la kulmay madaxda Galmudug, Hirshabeelle iyo Midowga Musharixiinta